आउला त जुकरबर्गको राजीनामा ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौँ– फेसबुकलाई लिएर कायम विवादबीच कम्पनीका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले भनेका छन् कि कम्पनी चलाउने कार्यका लागि उनी नै सबैभन्दा ठीक व्यक्ति हुन् । बुधबार जुकरबर्गले कन्फ्रेन्स कलमार्फत संवाददातासित भनेका छन्– जब तपाईं फेसबुक जस्तो कुनै चिज बनाइरहनुभएको हुन्छ, तब कहिलेकाहीँ कैयौँ गडबडी हुन्छन् नै । मलाई लाग्छ कि हामी आफ्ना गल्तीबाट सिकिरहेका छौँ भने मानिसले हामीलाई जवाफदेही बन्न दिनुपर्छ ।
जुकरबर्ग फेसबुकका संस्थापकका साथसाथै कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकारी र बोर्डका अध्यक्ष पनि हुन् । जब उनीसित सोधियो कि के कम्पनीमा उनको पदलाई लिएर पनि चर्चा भएको छ ? तब उनले भने– मेरो जानकारीमा त छैन । आजभन्दा महिना दिनअघि पनि केही मानिसले कम्पनीको नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेको हुनुपर्छ ।
तर, हालै तेस्रो पक्षद्वारा फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा चोरीसित सम्बन्धित रिपोर्ट र साथमै फेक न्युज र राजनीतिका लागि प्रचारबारे प्रकाशित समाचारपछि मानिसले कम्पनीको नेतृत्वका रूपमा जुकरबर्गको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेकोबारे प्रकाशित समाचारपछि मानिसले कम्पनीको नेतृत्वका रूपमा जुकरबर्गको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि यो कम्पनी अब जुकरबर्गको नियन्त्रणबाट बाहिर पुगेको छ ।
न्युयोर्क सिटी पेन्सन फन्डका प्रमुख स्कट स्ट्रिंगरका अनुसार जुकरबर्गले आफ्नो पद छाडिदिनु ठीक हुन्छ । यस फन्डका साथमा कम्पनीको लगभग एक अर्ब डलरको साझेदारी छ । उनले सिएनबिसीलाई बताए– उनका साथमा दुई अर्ब प्रयोगकर्ता छन् । स्कट स्ट्रिंगर अगाडि भन्छन्– तत्कालका लागि उनी कठिन परिस्थितिमा छन् ।
मानिसहरूलाई फेसबुक राम्रो लागोस् र आफ्नो तथ्यांकको सुरक्षालाई लिएर निश्चिन्त हुन सकून् भन्ने विषयमा जुकरबर्ग ढुक्क हुन सकेनन् । उनले जुकरबर्गसित आफ्नो सम्मान फिर्ता ल्याउन र आफ्नो दोस्रो अध्याय सुरु गर्नका लागि पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरे ।
फेलिक्स सेलमन लेख्छन्– उनले मात्र यस्तो कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका छैनन्, जुन धर्तीमा उपस्थित लगभग सबै मानिससित जोडिएको छ । अपितु, आर्थिक रूपमा उनी यति धनवान् छन् कि उनीसित सबैभन्दा बढी सेयरहोल्ड भोट छ र यसकारण बोर्डमा उनको भनाइको अर्थवत्ता रहन्छ ।
फेसबुक कम्पनीको बोर्डको गठन नै यसप्रकार गरिएको छ कि जुकरबर्गलाई निकाल्न सकिन्न । उनले स्वयं राजीनामा दिए भने त्यो फरक विषय हो ।
यस्तोमा उनी कसैप्रति पनि जिम्मेवार छैनन् । बोर्डको गठन नै यसप्रकार गरिएको छ कि उनलाई निकाल्न सकिन्न । उनले स्वयं राजीनामा दिए भने त्यो फरक विषय हो । र, मलाई लाग्छ कि उनले यस्तै गर्नुपर्छ ।
३३ वर्षमा मार्क जुकरबर्गले जस्तो सोचेका थिए, उनको कन्फ्रेन्स कल त्यस्तै थियो । एक समय उनले यो पनि भनेका थिए कि उनी बढी समय लिएर प्रश्नहरूको जवाफ दिन चाहन्छन् । उनको जवाफबाट हामीलाई फेसबुकबारे चलिरहेका नकारात्मक प्रचार र ‘डिलिट फेसबुक’ अभियानको असरबारे अलि बढी थाहा भयो । र, अहिलेसम्म यस्ता अभियानको कुनै खास असर परेको छैन ।
जुकरबर्गले भनेका छन्– हाम्रो जानकारीमा यसको कुनै खास असर परेको छैन । तर, यो राम्रो भने भइरहेको छैन ।
कन्फ्रेन्स कलका क्रममा यस विषयबारे थाहा हुन सकेन कि बन्द कोठामा जुकरबर्गको टिमले उनलाई कति मार्गदर्शन गरिरहेको छ । तर, एक यस्ता व्यक्ति जसको आलोचना सहानुभूतिको कमीका कारण गरिन्छ, उसले एक घन्टासम्म कुराकानी गरिरहनुले बताउँछ कि उनी साँच्चै मजबुत रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन चाहन्छन् । कम्पनीका लगानीकर्ताले यस्तो सोचेका होलान् । सायद यसैले गर्दा सो कन्फ्रेन्स कलपछि कम्पनीको सेयरमा तीन प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो ।
आगामी साता उनको कठिनाइ थप वृद्धि हुनेवाला छ । उनलाई कम्पनीका तर्फबाट तर्क पेस गर्न वासिङ्टन गएर अमेरिकी कंग्रेससामु पेस हुनुपर्नेछ । यहाँ क्यामेरासामु उनले आफ्ना कुरा राख्नुपर्नेछ ।